International Movie Archives - Page2of7- YTV
Home » Programs » International Movie » Page 2
အတ္တုပ္ပတိဇာတ်ကားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ YTV Channel ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ပထမကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွေမှာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ၊ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ The Lord of the Rings ရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် The Hobbit […]
Stay Home မှာ YTV Channel နဲ့အတူ Johnny Depp ဟာသလေးနဲ့ အပန်းဖြေကြမယ်ဆို အဆင်ပြေကြမလားအနုပညာပစ္စည်းကုန်သည်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ခံစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး အနုပညာပစ္စည်းတွေကို ထိန်းသိမ်းရတဲ့ပုံစံ၊ ရှေးဟောင်းအနုပညာပစ္စည်းတွေကို မှောင်ခိုသမားတွေလက်ထဲက ဉာဏ်ပါပါထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ ပုံစံကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ… ? […]
? ဝတ္ထုစာအုပ်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေက ဘယ်လောက်အထိကောင်းလဲဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်မယ့်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလို့ ဆိုရမယ့် ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်….. ? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Mo (Mortimer) လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့သူရဲ့သမီးလေး Meggie တို့က ဥရောပတခွင်သွားလာနေရင်း မမျှော်လင့်ပဲ Mo […]
? တရုတ်အက်ရှင်ဟာသလေးတွေနဲ့ Stay Home ရင်အဆင်ပြေမလား… ? ရယ်မောစရာတွေအပြည့်နဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ စွန့်ဦးတီထွင်လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်လေးတစ်ဦးက မရှိဆင်းရဲသားတွေအတွက် ရပ်တည်ပေးမယ့် ပုံစံလေးကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်… ? သူဌေးလေး ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့သွားရမလဲ….? ? သူ့တပည့်တွေကိုရော […]
? ထိတ်ထိတ်လန့်လန့် ဇာတ်ကားလေးတွေကိုမှ ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အတွက် ခြောက်ခြောက်ခြားခြားဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပြင်ဆင်ထားပါတယ်နော်… ?‍? ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဘယ်တော့မှမသေမယ့် လူသားမျိုးနွယ်ကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက် လူသေတွေကို အသက်ပြန်ရှင်လာအောင်လုပ်မယ့် သုတေသနတစ်ခုလုပ်ရာကနေ မကောင်းဆိုးဝါးတွေပူးကပ်လာတဲ့အခါ ? ဒီစီမံကိန်းက တကယ်ရောအောင်မြင်ပါ့မလား… ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ […]
? မင်းသားကြီး Will Smith ရဲ့မွေးနေ့မှာ သူ့ရဲ့အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်လေးနဲ့ ဖြတ်သန်းကြရအောင်… ? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အငြိမ်းစားယူတော့မယ့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က အရာရှိကြီးတစ်ယောက် သူနဲ့ ချွတ်စွပ်တူပြီး သူ့ကို လုပ်ကြံဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြန်လည်စုံစမ်းရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် […]